Tag: xeeladaha suuq geynta saamaynta | Martech Zone
Tag: xeeladaha suuq geynta saamaynta
Heshiiska Cusub ee Cusub ee Suuqgeynta Saameynta - oo leh Tusaalooyin
Talaado, Maarso 10, 2015 Axad, Oktoobar 4, 2015 Jeff Foster
Waxaan bilaabayaa anigoo dhahaya ha moogaanin Douglas KarrSoo bandhigida ku saabsan suuqgeynta saamaynta ee Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada Adduunka! Waa maxay Suuqgeynta Saameyntu? Asal ahaan, waxaa loola jeedaa qancinta dadka saameynta leh, qorayaasha ama dadka caanka ah ee la socda weyn si kor loogu qaado astaantaada akoonada shaqsiyadeed ee internetka. Fikrad ahaan waxay ku sameyn lahaayeen bilaash, laakiin xaqiiqda ayaa ah inaad lacag ku bixiso inaad ciyaarto. Tani waa suuq sii kordhaya oo soo celinta ayaa kuu horseedi karta astaantaada guul weyn markii la hawlgeliyo